China Palletizing robot HY1165A-290 Ndị na-emepụta ihe na ngwaahịa | Yunhua
HY1165A-290 bụ a 6 axis robot tumadi na-eji palletizing. ọ bụ akụrụngwa akụrụngwa ejiri rụọ ọrụ akpaghị aka, nke nwere ike ịkwakọba ihe na akpaka na pallets n'okpuru usoro mmemme, ọ nwere ike ịkwakọba n'ọtụtụ ọkwa, wee kpụga iji kwado njem nke forklifts n'ụlọ nkwakọba ihe maka nchekwa . Ebumnuche ya bụ iji nyere aka ma ọ bụ dochie palleti mmadụ.
Ndị ọrụ nwere ike iji ya rụọ ọrụ site na usoro dị mfe iji kpochapụ ngwongwo, na ịme nke a, ọ bụghị naanị na-enyere ndị ọrụ aka ịchekwa ohere ụlọ nkwakọba ihe na akụnụba mmadụ, kamakwa meziwanye arụmọrụ palletizing ma mee ka ngwongwo na-adịkwu mma.
Axis MAWL Ọnọdụ nkwughachi Ike
Ebe ọrụ Oke ibu Ntinye IP ọkwa
6 165 KG Mm 2mm 10KVA 0-45 ℃ 1800KG ala IP54 / IP65 (úkwù)
± 170 Celsius + 78 Celsius ~ -38 Celsius 0 ° ~ 60 Celsius ± 220 Celsius ± 125 Celsius ± 360 Celsius
Oke ọsọ 70 Celsius / s 82 Celsius / s 82 Celsius / s 134 Celsius / s 77 Celsius / s 120 Celsius / s
Q1.Kedu ka ọnụahịa nke palletizer robotị jiri tụnyere ndị ọzọ?
Palletizer AA robotic dị oke ọnụ karịa otu ngwaahịa sel sistemu siri ike mana ọ dị ọnụ ala karịa nnukwu palletizer raara onwe ya nye nwere ọtụtụ infeeds. Palletizing robotic nwere ike ịdị na $ 10K n'ụdị ya kachasị mfe na $ 30K + maka ahụ robot.
Q2. Kedu ụdị Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ (EOAT) ejiri mee ihe maka ịkwanye ugwu?
A. E nwere ọtụtụ nhọrọ EOAT dịnụ nke ọ bụla nwere ojiji ha nwere. Agụụ agụụ ma ọ bụ mpe mpe akwa a na-ejikarị emechi okwu ikpe na pails. A scoop ngwá ọrụ ma ọ bụ a ngwakọta scoop & mwekota ngwá ọrụ na-adịkarị eji maka emeghe n'elu ikpe ma ọ bụ trays. A akpa ngwá ọrụ na-eweli mkpịsị aka & a tamp na-adịkarị eji maka nnukwu akpa ke 20-100 # nso. A na-ejikarị ngwa ngwa ejiri akụkụ ndị na-adịghị mma.
Q3: Gịnị bụ robot palletizing?
A. Site n'iji igwe na-ebu robot na-ebughari ulo ahia gi, ị nwere ike ime ka nhazi nke ibudata na nbudata gi.
Q4.What ị chere YOO obi mgbe ya na Japan na Europe ika robot?
A.we ka nwere oke dị ogologo, anyị ga-ahụrịrị nke a. Anyị ebumnuche ndị ahịa bụ obere na-ajụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-enweghị ike imeli nnukwu ego maka ndị a ma ama ụdị, dị ka ABB, Funac, Kuka, Yaskawa, OTC.
Q5.Where m nwere ike na-eme gị robot akara usoro?
A.Olee mba ị nọ? ị nwere ike ịbịa ụlọ ọrụ anyị maka ọzụzụ n'efu. Ma obu inwere ike juo ndi na ere anyi na obodo gi maka enyemaka.
Nke gara aga: zọ robot HY1003A-098
Osote: Palletizing robot HY1010A-143